Daba! Sulultaa: Lafa Oromoo Eenyutu Saamee; Waaqeffataan Oromoo bakka awwaalcha dhabee ? Itti yaadi yaa OPDO! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDaba! Sulultaa: Lafa Oromoo Eenyutu Saamee; Waaqeffataan Oromoo bakka awwaalcha dhabee ? Itti yaadi yaa OPDO!
Ilma Oromoo ykn Waaqeffataa du’e awwaalcha lafa isaa irratti hin awwaaltan qarshii kuma kudha torba nuu kafaltan malee jechuun qeesootaa tuffii fi qorqalbii Waaqeffatrootaa xuqna, qabeenya irraa saamna jechuu akka ta’e ni hubatama.
Gama biraan ammoo Humna waraanaa ummaatni beetakiristaani gubuufi jedhanii waamuun nutu har’as mootummaa ajaja, Oromoon shororkeessadha jedhanii maqaa xureessuuf yaaluu, akkasumas Dhaloota fi humna waraanas akkuma bara duraa addaan fageessuuf herreega hojjatame akka ta’e hubatamuu qaba. Bulchiinsi aanichaas,heerrega kana gadi fageessee herreegu qaba.
Nuti lafa keenyarra jirra. Bakka namni itti awwaalamutti Waaqeffataan boqate yoo awwaalame hin morminu. Jiruunu waliin jirraa maalif awwaalcharratti gargar baanare!? Yookan ammoo mootummanis gaaffi dhimma awwaalchaa waaqeffattootafis yoo deebise adda nuu baases tolaadha. Bakka keenyatti namni du’e yoo awwaalame hin jibbinu.
Ergamni guddaan garuu tuffii qeesotaa fi saamicha qabeenyaa asiinis nutti jiru waan ta’ef shira kana ni balaaleffanna.
Hawaasni Oromoo obsan daba kana baga injifattan. Ofta’uun haa mootu.
Abbaa keenya darbes ayyaantummaa fi bultumni isaanii ilmaan fi dhaloota isaaf haa hafu.
Seenaa har’allee awwaala dhorkamu Abbaa lafaa lafasaarratti Fulbaana 05/2012 Sulultaa tti ta’e.